Ukulungiswa kwegama eliphambili kuPhando
Iinjini zokukhangela zifumana amagama aphambili kwizinto ezahlukeneyo zephepha kwaye uzisebenzise ukumisela ukuba iphepha kufuneka libekwe kwiziphumo ezithile okanye hayi. Ukusetyenziswa ngokuchanekileyo kwamagama aphambili kuya kwenza iphepha lakho libe nesalathiso kukhangelo oluthile kodwa ayi isiqinisekiso sokubekwa okanye isikhundla ngaphakathi kolo phendlo. Kukwakho nezinye iimpazamo zegama eliphambili ukubaleka.
Iphepha ngalinye kufuneka lijolise kwingqokelela eqinileyo yamagama aphambili. Ngokoluvo lwam, akufuneki ubenalo iphepha elijolise ngaphezulu kwe-3 ukuya kwi-5 kwaye ezo kufuneka zinxulumene. Ke 'uluhlu lokuposa' kunye 'noluhlu lokuthengisa ngokuthe ngqo' zinxulumene nesilumko esinye sesifundo kwaye zinokusetyenziselwa ukusebenzisana kunye kwiphepha.
Iphepha lakho kufuneka ligxile kumxholo omkhulu oqhuba uguquko, ungagxili ukufaka amagama aphambili kulo mxholo. Ukusetyenziswa kwendalo kwamagama aphambili kubaluleke kakhulu- ukuze iinjini zokukhangela zibone amagama aphambili kodwa iindwendwe aziziboni. Umxholo uqhuba ukuguqulwa (ukuthengisa) -bhala kakuhle!
Kuphi uPhando lwamagama aphambili
Ezona zixhobo ndizisebenzisela zona kwakhona yophando ngegama elingundoqo are Semrush kwaye BuzzSumo. I-BuzzSumo ibonelela ngokuqonda kumxholo wokuthandwa kunye Semrush ibonelela ngengqondo kumgangatho womxholo… ezi zimbini azihlali zifana. Ngaphandle kweninzi yophicotho kunye nezixhobo zokubeka, Semrush wenza nje umsebenzi omangalisayo wokuchonga awona magama abalulekileyo kwishishini lakho. Nazi iindlela ezimbalwa endizisebenzisa ngayo esi sixhobo:
Amagama aphambili eDomain -Ndibaleka iingxelo kumthengi ukuba ndichonge amagama aphambili asenokuba sele ekulindelwe kuwo kwaye ndibone ukuba zikhona na izicwangciso ezinje ngokutshintsha umxholo kunye nokunyusa endinokukuhambisa okuya kuphucula umgangatho wabo.
Amagama aphambili ahambelana noko -Xa ndifumana amagama aphambili endinqwenela ukujolisa kuwo, ndibaleka iingxelo zamagama aphambili ukuze ndichonge ezinye indibaniselwano zamagama aphambili endinokuthi ndikwazi ukuwafumana ngcono.
Uhlalutyo lomsantsa - Semrush inomsebenzi obalaseleyo apho unokuthelekisa imimandla emininzi kwaye uchonge apho ukhuphisana khona neminye imimandla. Sihlala sichonga amagama aphambili abakhuphisana nabathengi bethu abakuluhlu esingakhange silulandele.
Indlela yokusebenzisa amagama aphambili ngokufanelekileyo kwindawo yakho ye-SEO
thambeka -Ukuba igama lakho lesizinda linamagama aphambili, kulungile. Ukuba akunjalo, kulungile ngokunjalo. Qiniseka ukuba ubhalisile isizinda kangangeminyaka eli-10 ukuze uGoogle aqonde ukuba ayisosiza sogaxekile kwaye siyasebenza. Ubude bokubhaliswa kwesizinda yintsomi ye-SEO. Nangona kunjalo, i-domain encinci iya kuba negunya elingaphantsi kwelo linokusetyenziswa ngaphambili kwiimpawu ezifanayo. Phambi kokuba ujonge indawo entsha, jonga iifandesi kweminye imimandla efanelekileyo… unokufumana isiqalo sentloko ukuba usaqala!
Iphepha Lasekhaya Isihloko Tag -Qiniseka ukuba ithegi yetayitile yekhasi lasekhaya inemigaqo embalwa oyilandeleyo kwaye uyibeke phambi kwegama lenkampani yakho.
Isihloko seTag -Iphepha ngalinye elizimeleyo kufuneka libe namagama aphambili agxile kuwo.
Iimpawu zeMeta Ithegi yamagama aphambili ayihoywa ziinjini zokukhangela kunye namagama aphambili asetyenzisiweyo kwinkcazo yephepha lakho. Nangona kunjalo, xa umntu ekhangela igama elithile elingundoqo, kuyabhalwa kwiphepha leziphumo zeinjini yokukhangela ukuze umsebenzisi wokukhangela abenakho ukucofa kwisiphumo sakho.
Isihloko seethegi -Ku-HTML kukho izihloko kunye nemixholwana. Oku ngokukodwa , , Iimpawu ngokulandelelana kwazo kokubaluleka. Iinjini yokukhangela ziqwalasele ezi thegi kwaye kubalulekile ukuba uziqwalasele kunye nokwenza amaphepha kunye nokusebenzisa amagama aphambili. Kwiiposti zebhlog, sebenzisa amagama aphambili kwizihloko zakho zebhlog. Kuphephe ukusebenzisa , , okanye iithegi kwibar yakho esecaleni.
Bold kunye ne-Italics -Ngqindilili okanye italicize amagama akho aphambili kwiphepha ukuze bavele.
I-Alt yomfanekiso kunye nenkcazo -Ukuba usebenzisa umfanekiso (ucetyisiwe) ngaphakathi kwamaphepha esiza sakho okanye iiposti, qiniseka ukusebenzisa amagama aphambili ngokufanelekileyo kwi-alt yomfanekiso okanye iithegi zenkcazo.
Inkqubo yakho yolawulo lomxholo kufuneka ikuvumele oku.
Amakhonkco angaphakathi -Ukuba ukhankanya ezinye izithuba okanye amaphepha ngaphakathi kwendawo yakho, qiniseka ukusebenzisa igama eliphambili kwisicatshulwa se-anchor yekhonkco kuloo mxholo nakwithegi yetayitile yethegi ye-anchor.
Gwema ukusebenzisa amagama aqhelekileyo afana 'funda ngakumbi' okanye 'cofa apha'.
Amagama okuQala eMxholo Amagama okuqala kwiphepha lakho okanye ngeposi kufuneka abandakanye amagama aphambili afanelekileyo kumxholo okwelo phepha.
Phezulu kwePhepha Iinjini zokukhangela zijonga iphepha kwaye zihlalutye umxholo ukusuka phezulu kuye ezantsi, umphezulu wephepha ngowona mxholo ubalulekileyo kwaye emazantsi ephepha akubalulekanga. Ukuba ubeko lwekholamu, jonga kwinkampani yakho eyile umxholo wakho kwaye uqinisekise ukuba iikholamu zisezantsi kwi-HTML yakho kunomzimba womxholo wakho (imixholo emininzi ibeka ibar yecala kuqala!)
Ukusetyenziswa okuphindiweyo -Kumxholo wakho (okwaziwa ngokuba yi Ukuxinana kwegama eliphambili), kubalulekile ukusebenzisa amagama aphambili ngokwendalo kumxholo wakho. Iinjini zokukhangela ziya ziba nobunkunkqele ekufumaneni imigaqo efanelekileyo, ke wena Akunyanzelekanga ukuba uphinde ibinzana elifanayo. Soloko usebenza ekuqinisekiseni ukuba umxholo wakho wendalo kwaye unyanzelekile. Ngelixa umxholo ophuculweyo ungakufumana, ayizukuthengisa!
Nali elinye inqaku… amagama aphambili akufuneki afane. Amagama okwenzeka ngokufanayo kunye nezithethantonye zibaluleke kakhulu kwaye zinokufumana umxholo wakho kufumaneke kuludwe olukhulu lokudityaniswa kophendlo ukuba uyawasebenzisa. Kumzekelo wale posi, ndisebenzisa amagama anje Ukusetyenziswa kwegama elingundoqo, kodwa ndikwasebenzisa amagama anje seo, Ukuxinana kwegama eliphambili, umxholo, tag tags… Yonke imigaqo enxulumene nesihloko kodwa inokwenza ukuba esi sithuba sifumaneke ngokudibanisa okuninzi.
Kukwabalulekile ukuba uqaphele ukuba abasebenzisi beenjini yokukhangela bathayipha indibaniselwano ende yamagama aphambili- kubandakanya imibuzo kunye namanye amabinzana ukunciphisa iziphumo. Ke igama elingundoqo alilinganiswanga kwindibaniselwano yamagama e-1 okanye yesi-2, inokuba sisivakalisi sonke! Kwaye siye safumanisa ukuba okukhona indibaniselwano inde, kokukhona kuya kuba ngcono umdlalo, kokukhona kufanelekile ukugcwala - kwaye kokukhona kunokwenzeka undwendwe luguquke.
Ukuba unokufumana amakhonkco angaphandle ngamagama aphambili abuyela kwindawo yakho, nokuba ngcono! Esi sithuba besimalunga nokusetyenziswa kwegama elingundoqo kwisiza, nangona.
Amagama aphambili abambe ukubaluleka kakhulu kwishishini elinewebhusayithi ezibaluleke kakhulu ekusebenzeni kwazo. Xa isetyenziswe ngokufanelekileyo, iiwebhusayithi eziphambili ezilungiselelwe amagama zinokubangela iziphumo ezingcono zokukhangela kunye nokwandisa ukugcwala kwivenkile ekwi-intanethi. Okokugqibela, ikwanceda ishishini libe nomtsalane kwithemba elinethuba eliphezulu lokuguqula libe kukuhlawula abathengi. Umakhi oshishino osempilweni
Nantsi i-infographic evela kuMakhi oShishino olusempilweni, Kutheni amagama aphambili ebaluleke kangako kwiintengiso zakho ezikwi-Intanethi:
Ukubhengezwa: Ndisebenzisa indawo yam yokudibanisa Semrush kwinqaku.
tags: enye indlela yokubhaliweyongesibindiamagama aphambili esizindakugxininiswaUhlalutyo lwesikhewuiithegi zentlokoekhayaumfanekiso altokekeleyoukhuphiswano lwamagama aphambiliyophando ngegama elingundoqoUkusetyenziswa kwegama elingundoqoamagamameta amagama aphambiliUkulungiswasemrushSEOU namandlatag tags
Nov 9, 2009 ngo-10:18 PM
Lo ngumxholo omkhulu uDouglas. Iisayithi ezininzi, izinto ezininzi eziguquguqukayo, kunye neenguqulelo ezininzi phaya kangangokuba ziye zibhideke kuye nabani na oqala ukufunda malunga nebala le-SEO. Kodwa uye ngqo kwinto ebalulekileyo nengeyiyo; oko abanye bakubiza ngokuthi "kwinqaku"! Ngokuqinisekileyo kufanelekile ukwabelana nabahlobo bam. —UPawulos
Nov 10, 2009 ngo-2:46 AM
Ukufumana okumangalisayo, PJ! Ndakhe ndeva amazwi athi 'ingxondorha' ndagqiba kwelokuba ndiyifake eposini. Ndicinga ukuba ayenzi buhlungu nantoni na (ngaphandle kwesipaji sakho)! Enkosi ngokuthatha ixesha kunye nokuthumela oku!
Nov 11, 2009 ngo-2:29 AM
Ingaba #1 nyani nyani? Ndive izimvo ezahlukahlukeneyo ngayo. Ndinazo zonke iindawo zam zohlaziyo lonyaka we-1. Ngaba ngokwenene ndizifaka kwi-domain yam engundoqo yeshishini ngokungayandisi ukuya kwiminyaka eli-10?
Nov 11, 2009 ngo-2:55 AM
U-PJ ​​wenze uhlalutyo olukhulu kwaye ufumene amanqaku athile kuGoogle aphikisana noku. Ngoko-ndicinga ukuba andinakuzikhathaza kakhulu ngayo. Ndisayenza, nangona…Ndicinga ukuba luqheliselo olulungileyo kwaye ndiyayithiya into yokuba zisoloko zibonakala ziphela xa ndingenamali!
Meyi 9, 2013 kwi-5: 18 PM
Enkosi ngenqaku. Kwanale nto yabhalwa kwiminyaka eyi-3.5 eyadlulayo isabalulekile kwaye iluncedo kakhulu.
Meyi 9, 2013 kwi-8: 22 PM
Isebalulekile, kodwa ndingabeka ingqwalasela encinci kuphindaphindo kwaye ndigxininise ngakumbi ekwenzeni umxholo omkhulu. UGoogle uza kujonga apho kufuneka abe khona!
Agasti 29, 2013 kwi-7: 32 AM
Agasti 20, 2015 kwi-5: 29 AM
Inqaku elimangalisayo, ndiyazibuza ukuba izinto ziyafana namhlanje njengoko zazinjalo ngaphambi kweminyaka emi-3-4.
Agasti 20, 2015 kwi-10: 15 AM
Ubukhulu becala, ndiyakholwa ukuba isabalulekile. Nangona kunjalo, ndingakhuthaza ukubhala kumfundi wakho kwaye AKUNIKA ingqwalasela eninzi kubuchwephesha be-SEO keyword optimization. Ngelixa ezi zicwangciso zinokukunceda ukuba ufumane isalathiso ngokuchanekileyo, umgangatho uya kuxhomekeka ekudumeni kwaloo mxholo. Ukusebenza ekuqinisekiseni ukuba unomxholo omkhulu, ocebileyo kubaluleke kakhulu kunokubekwa kwegama elingundoqo kwi-2015. Kananjalo, i-Google iyaqaphela imimiselo ye-co-occurrence namhlanje kakhulu kunokuba yenzayo ngaphambili.
Jul 19, 2017 ngo-8: 04 AM
Amagama angundoqo adlala indima ebalulekileyo kwi-SEO. Abantu abaninzi bayasilela ukubeka kakuhle kwiinjini zokukhangela, ngenxa yophando olungafanelekanga lwegama elingundoqo kunye nokubekwa. Nangona kunjalo, enkosi kwiposti yakho, nabaqalayo ngoku banokugqwesa ubugcisa begama elingundoqo. Inqaku elikhulu. Iluncedo ngokwenene. Enkosi kakhulu ngokwabelana!